Tu Tu Tha: မယူလိုက်က မိုက်လို့ထင် ယူလိုက်ပြန်က ကြိုက်လို့ထင် (၅)
Tuesday, October 06, 2009 | Labels: ဝတ္ထုရှည် |
This entry was posted on Tuesday, October 06, 2009 and is filed under ဝတ္ထုရှည် . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
ဂျာနယ်သတင်းထောက်တွေအကြောင်းရော၊ ဖတ်ရတော့ ပိုကြိုက်မိတယ်..။
ဒီဝတ္ထုကို ဖတ်ပြီးသားလိုလို ခံစားရလို့ အပိုင်း(၁)ကို သွားပြန်ဖတ်ကြည့်တာ ချိုးလင်းပြာ မဂ္ဂဇင်းမှာ ပါဖူးတယ်ရေးထားတယ်.. တကယ်တော့ ချိုးလင်းပြာ မဂ္ဂဇင်းကို ညီမ သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး.. ဒီအပိုင်းမှာ စိစစ်ရေးအကြောင်းတွေပါ ရေးထားတာတွေ့တော့ ပြည်တွင်းထုတ် မဂ္ဂဇင်းမဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်..။
ama, thanks ama yae..
i ll comment later.
this post is totally gd.
If possible, i wanna copyapdf file and sending to all my friend.
မနာလိုချင်းများစွာနဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ချစ်တဲ့ ယောက်ကျားတွေ တကယ်ရှိတယ် အစ်မ သိလား..ညီမလေးကို စောင်းပြောထားသလားတောင် ထင်ရတယ်..ဟိဟိ ကွတ်တိပဲ
တော်သေးတယ်နော် သတင်းထောက်မလေးက ကိုယ်က ဦးအောင် ခွာချပစ်ခဲ့မိလို့ :):)
eagerly waiting for the ending - hope it turns out the way I wanted :D
ကလေးရှိရင်သံယောဇဉ်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ ရှေးစကား မယုံမိတာ အဲ့ကလေးမ မှန်သွားတယ်